ကမ္ဘာ့အလှဆုံး အလန်းဆုံး ကစားကွင်း ၁၂ ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » ကမ္ဘာ့အလှဆုံး အလန်းဆုံး ကစားကွင်း ၁၂ ခု	3
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး အလန်းဆုံး ကစားကွင်း ၁၂ ခု
Posted by သျှားသက်မာန် on Oct 27, 2016 in Travel |3comments
ရိုလာကိုစတာ အကြီးကြီးတွေနဲ့ ကစားစရာ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ ကစားကွင်းကို သင့်ဘဝ မှာ သင့်ဘော်ဒါ၊ သင့်ချစ်သူ၊ သင့် သားသမီး၊ သင့်တူလေး တူမလေး တွေ၊ သင့်မိသားစု နဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အရောက်သွားလည်စေချင်ပါတယ်။
မွန်လေးတို့ နိုင်ငံနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး စင်ကာပူ က နံပါတ် (၁၇) မှာရှိနေပြီး ဟောင်ကောင် ကတော့ (၂၅ ) မှာရှိနေပါတယ်။
ဘန်ကောက် က Dream World က နံပါတ်စဉ် မချိတ်ပေမဲ့ လည်ပတ်လို့ကောင်းပြီ ဈေးသက်သာတဲ့ ကစားကွင်း ဖြစ်လို့ သွားရောက်လည်ပတ်စေချင်တယ်နော်…
1.Universal’s Island of Adventure Orlando, Florida
2. Discovery Cove Orlando, Florida
3. Magic Kingdom Orlando, Florida
4.Europa-Park Rust, Germany
5.Universal Studios Florida Orlando, Florida
6. Universal Studios Hollywood Los Angeles, California
7.Disney’s Hollywood Studios Orlando, Florida
8.Disneyland Park Anaheim, California
9. Disney California Adventure Park Anaheim, California
10.Beto Carrero World Penha, Brazi
11. Tivoli Gardens Copenhagen, Denmark
17.Universal Studios Sentosa Island, Singapore
Thint Aye Yeik says: လန်းတယ်
ဖလော်ရီဒါနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာချည်းပဲ ကစားကွင်းတွေ မနည်းဘူးပေါ့
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်တယ်..အများကြီးပဲ